रोनाल्डो हैन मेसि बने विश्वकै सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडी, मेसि र रोनाल्डोको कमाई कति ? – Nepal Trending
रोनाल्डो हैन मेसि बने विश्वकै सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडी, मेसि र रोनाल्डोको कमाई कति ?
On २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:४१
काठमाडौं : अर्जेन्टिनाका स्टार एवं बार्सिलोनाका आइकन लियोनल मेस्सी विश्वकै सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको शीर्ष सूचीमा परेका छन् । अमेरिकाको चर्चित बिजनेस म्यागाजिन फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको विश्वमा सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको पहिलो सुचीमा मेस्सी परेका हुन् ।
फोब्र्सका अनुसार मेस्सीको बार्षिक कमाई एक सय २७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । दोस्रो स्थानमा पोर्चुगल एवं युभेन्टसका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेका छन् ।
पाँचौं स्थानमा अटाएका स्वीस टेनिस स्टार रोजर फेडेररको कमाई ९३.४ मिलियन, छैटौं स्थानमा रहेको अमेरिकन फुटबलर रुसेल विल्सनको ८९.५ मिलियन र सातौं स्थानमा रहेका अमेरिकाकै फुटबलर आरोन रोड्जर्सको ८९.३ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।
यसैगरी बास्केटबलका लेब्रोन जेम्सको ८९ मिलियन सहित आठौं र बास्केटबलमै स्टेफेन्स करी ७९.८ मिलियन डलरसहित नवौं र केभिन डुरान्ट ६५.४ मिलियन डलर सहित शीर्ष १०मा अटाएका छन् ।
युरो कप छनोट अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा विश्वकप विजेता फ्रान्सले एन्डोरामाथि ४–० गोलको प्रभावशाली जित निकालेको छ । फ्रान्सको जितमा युवा स्ट्र«ाईकर केलियन एमबाप्पे, विसम विनयडर, फ्लोरियन थाउभिन र कुर्ट जौमाले गोल गरे । एमबाप्पेले ११औं मिनेटमा खाता खोलेका थिए । विसमले ३०औं मिनेटमा गोलगर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए । फ्लोरियनले पहिलो हाफको इन्जुरी समय र कुर्टले ६०औं मिनेटमा गोलगर्दै फ्रान्सलाई सहज जित दिलाएका थिए ।
जितसँगै समूह ‘एच’ मा रहेको फ्रान्स नौ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । फ्रान्सले समान नौ अंक बनाएको टर्की र आइसल्यान्डलाई गोलअन्तरको आधारमा पछि पारेको छ । एन्डोराले अंक जोड्न सकेको छैन । समूह ‘एच’ कै अर्को खेलमा आइसल्यान्डले टर्कीलाई २–१ गोलले हराएको छ । आइसल्यान्डको जितमा दुवै गोल रगनर सिगुर्सनले गरे । टर्कीका डोरुखान टोकोजले एक गोल फर्काए । अर्को खेलमा अल्बानियाले मोल्डोभालाई २–० गोलले हराएको छ ।
यसैगरी युरोकप छनोटकै समूह ‘सी’ को खेलमा जर्मनीले इस्टोनियालाई ८–० र नर्दन आयरल्यान्डले बेलारुसलाई १–० गोलले हराएको छ । समूह ‘जे’ को खेलमा इटालीले बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनालाई २–१, अर्मेनियाले ग्रीसलाई ३–२ र फिनल्यान्डले लिचेसटेन्सटेनलाई २–० गोलले हराएको छ ।
समूह ‘इ’ को खेलमा वेल्सले हंगेरीलाई १–० र स्लोभाकियाले अजरबैजानलाई ५–१ गोलले पराजित गरेको छ । समूह ‘आई’ को खेलमा बेल्जियमले स्कटल्यान्डलाई ३–०, रुसले साइप्रसलाई १–० र काजकस्तानले सानमारियोलाई ४–० गोलले हराएको छ ।